Liberalerna iyo SD oo ku Heshiiyay Adkeynta Qofka loo ogolaanayo Imaatinka Sweden Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaLiberalerna iyo SD oo ku Heshiiyay Adkeynta Qofka loo ogolaanayo Imaatinka Sweden
May 3, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Xisbiga Liberalerna iyo SD ayaa ku heshiiyay siyaasada Socdaalka Sweden ee ku aadan Qofka loo ogolaanayo Imaatinka Dalka.
Sharciga Cusub ee isku raaceen Labada Xisbi kuna saabsan Adkeynta Sharciga Qofka doonaya in yimaado Dalka waxaa kula jira labada Xisbi ee kala ah M iyo KD taasi oo ka dhigeyso Afar Xisbi oo ka mideysan Siyaasada Socdaalka.
Afartan Xisbi ayaa dhanka kale doonaya in ay Qeyb ka noqdaan Dowlada Cusub si looga arko Qorshahooda Cusub ee dhanka Socdaalka.
Iyadoo ay jirto Qorshaha Cusub ee Afarta Xisbi ayaa Xalay dood loo qabtay Labada Xisbi ee kala ah SD iyo L dooda ayaa ka dhacday Talefashinka SVT.
Dooda oo looga hadlay Arimo badan waxaa ku jiray dhanka Socdaalka labada Hogaamiye ee Nyamko Sabuni
Iyo Jimmie Åkesson ayaa dooda dhexdeeda durba isku qilaafay.
Xisbiga SD ayaa siyaasad ahaan aad uga soo horjeeda Qaxootiga Sweden waxana uu doonayaa in la adkeeyo wax walbo oo ku saabsan Socdaalka.